ती व्यक्तिहरूको लागि जोसुकै हुन सक्छ, दुबै दु: ख पार्दछ ब्लेक एक चाल हो जसले तपाईंलाई आफ्नो शर्त माथि 100% सम्मको रकम प्रदान गर्दछ (यानी यसलाई दोहोर्याउनुहोस्)। एक पटक तपाईंको बढि शर्त तालिकामा छ एकपटक, तपाईं त्यसपछि एक मात्र कार्डलाई अनुमति दिइन्छ। एक खेल परिदृश्यमा, यसको अर्थ तपाईले तपाइँको प्रारम्भिक दुई कार्डहरू निलम्बित गर्नुभएको छ, यो अनलाइन ब्ल्याक जैकमा रोमाञ्चक पल हो जब तपाइँ डबल डाउन गर्न निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
निस्सन्देह, त्यहाँ रणनीतिहरू सामेल छन्, र कहिलेकाहीँ दुबै दुबैलाई खतरनाक ब्लेक्याक जुवा हुन सक्छ। यो लगभग तपाईंको बेटिंग विकल्प पनि समाप्त हुन्छ। दैलो डाउन दबाव निर्णय सामान्यतया आफैंले अनुमानित तरिकामा समाधान गर्दछ: ती धेरै खेलाडीहरू जोसुकै अचम्म लागेका हुन्छन् र उनीहरूको विजेताका अभावहरू सुधार गर्न मौका पाउँछन्। र यसैले गेम्सबाट क्र्यास बाहिर सायद उनीहरूले धेरै राम्रो संकलन गरेका थिए।
जब तपाईं अनलाइन ब्ल्याकज्याक प्ले गर्नुहुँदा दुबै दबाउनुहुन्छ
ब्ल्याक ज्याक कम से कम 'घर किनारा' संग कैसीनो खेलहरु मध्ये एक हुन प्रतिष्ठित छ, जो यो औसत अनलाइन कैसीनो खेलाडी को लागी अधिक लाभदायक बनाउन सक्छ। तथापि, विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई सम्झाउनेछन् कि यो वास्तवमा एक औसत खेलाडी भनेको ब्ल्याकैक नियमहरू जान्छ र अनलाइन ब्ल्याक जैक खेलहरूमा तार्किक र इष्टतम ब्ल्याक ज्याक रणनीति पछ्याउनुहोस्। संसारमा कुनै पनि रणनीतिहरूले एक खेलाडीलाई मद्दत गर्न सक्दछ जसले केवल दाबी गर्दछ र कार्ड वा स्पिममा छनोट गर्दछ।
तर सही क्षणमा डबल डाउन गर्न चयन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा सही तरिकाले प्रयोग गरेको छ, यसले तपाईंलाई अझ राम्रो घर किनारा प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसोभए यो साँच्चिकै राम्रोसँग परिचित हुन सक्ने एक कदम हो। त्यसोभए अनलाइन कल्याणकारी खेलाडीहरूले राम्रो सल्लाह दिएका लागि राम्रो सल्लाह दिएका थिए कि तपाईले राम्रो पैसाको लागि अनलाइन ब्ल्याकैक खेलमा प्रयास गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो अनुभव सिर्जना गर्न स्क्रिनबाट केही नगद ह्यान्ड ह्यान्ड्स चलाउन प्रयास गर्नुहोस्।
हार्ड9डबल डाउन
यदि तपाईले9ह्यान्डलाइट टाँस्न सक्नुभयो भने, डबल डेल हुँदा2र6(त्यसैले7अन्तर्गत कुनै पनि कार्ड, तर Ace सहित) कार्ड बीच थाहा पाउँदछ। यो एक मुश्किल9हात हुनु पर्छ - त्यसैले तपाईं Ace पकड गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंको संयोजनहरू 4-5, 3-6 वा 2-7 हुन सक्छ। तर यदि तपाई A-8 (एक नरम 9) लगाइएको छ भने तपाई सधैँ खडा हुनुपर्दछ।
हार्ड 10 र हार्ड 11 डबल डाउन
जब तपाइँ हार्ड 10 वा 11 पकड गर्नुहुन्छ, तपाई शक्तिशाली स्थानमा हुनुहुन्छ। दुई कार्ड संयोज जो तपाईंलाई दिईयो यो हो: 2-8, 2-9, 3-7, 3-8, 4-6, 4-7, 5-6। यसैले यदि डीलरले निचला कुल प्रकट गर्छ भने, डबल डाइरेक्टरीको लागि जानुहोस्।
सफ्ट 16 लाई 18 लाई डबल डाउन
जब तपाइँ एक Ace plus 5,6वा7राख्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई 16 को 18 को 'नरम' कुल प्रदान गर्दछ। त्यसैले यदि डीलरले2बाट6बाट कार्ड पत्ता लगाएको छ भने, तपाइँ तुरुन्त डबल डाउन गर्नुपर्छ। Ace plusalow card (2,3 वा 4) मा यो कदम जोखिम नगर्नुहोस्; यो भन्दा राम्रो छ बस यसको सट्टामा हिट।
दुरुपयोग को लाभ र नुकसान
एक डबल डाउन कार्यान्वयन आफैलाई अतिरिक्त शर्त दिन को लागी एक तरीका हो जब तपाईंसँग एक राम्रो राम्रो विचार चीज तपाईंको बाटो जान पर्छ। यद्यपि तपाईं आफ्नो बैंकको अधिक जोखिम खडा गर्नुहुन्छ, तपाइँसँग तपाइँको निर्णयलाई समर्थन गर्नको लागि तालिकामा केही राम्रो जानकारी छ।
केही खेल नबिर्सनुहोस् पनि तपाईंलाई विभाजित जोडामा डुब्न दिइन्छ। उदाहरणका लागि, एक 10, 10,3वा4देखाउने व्यापारीसँग 5-6 हात समात्न, तपाइँसँग तुरुन्तै तपाइँको जोडीको विभाजन गर्ने विकल्प छ, प्रत्येकमा डबल गर्नुहोस्, र ती दुवै हातहरूमा 21 को लागि जानुहोस्!
तर तपाईलाई डबल डाउन गर्न जब तपाइँ पनि जोखिम लिनुहुन्छ कि सम्झनुहोस्। डीलरले प्रत्येक खेलाडिको पछि सधै आफ्नो कार्डहरू प्ले गर्दछ र यसैले अझ बढी जानकारी छ जसको बारेमा उसको कार्ड बजाउनको लागि। निस्सन्देह, यो ठीक हो जुन घर किनारा छ। र जब पनि हात बाँडिएको बेलामा नबिर्सनुहोस्, तपाइँ सबै एक खेलाडीको रूपमा फिर्ता पाउनुहुन्छ तपाईंको मूल दाबी पैसा हो।
नियमहरूमा ध्यान दिनुहोस्
यहाँ वर्णन गरिएको ब्ल्याक ज्याक रणनीतिले प्रायः हरेक ब्ल्याक ज्याक खेलमा राम्रो काम गर्नुपर्छ। तर केवल जान्नुहोस् कि, भू-आधारित क्यासिनोमा पनि, कालो जैक नियम केही परिवर्तनको विषय हुन सक्छ। र अनलाइन क्यासिनोहरू पारंपरिक ब्ल्याक जैक गेमको फरक संस्करणहरूसँग डराउन लाग्न सक्छ।
कहिलेकाहीँ यो धेरै धेरै कुरा गर्दैन, तर कहिलेकाहीँ यो (वा हुनुपर्छ) आफ्नो निर्णय बनाउने असर गर्न सक्छ।
लगभग हरेक ब्लैकज्याक गेममा यो रणनीति सत्य रहनु पर्छ। यद्यपि, के हो कि केसीका नियमहरू क्यासिनोहरू बीच फरक हुन्छन् भनेर सजग रहनुहोस्, जुन तपाईंको निर्णय गर्ने कामलाई असर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ तीन वा धेरै कार्डहरू हातमा डबल गर्न अनुमति दिनुहुन्छ, त्यसपछि अतिरिक्त हातहरू हुनेछ जुन तपाईले व्याख्या गरिएका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर डबललाई तल पार्न सक्नुहुनेछ। र पनि, खेल नियमहरूले तपाईंलाई सामान्य दुबारा रणनीतिमा भन्छ जब तपाइँलाई दुबै दुरीबाट रोक्न सक्दछ। त्यसैले यदि तपाईं डबल डाउन कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नुभयो भने यसको सट्टा अर्को हिट लिनुहोस्।
जैकपोट सिटी अनलाइन कैसीनो बोनस कोड >>
झुकाव र तपाईं
Beginners को लागि भिडियो पोकर युक्तिहरु
कैसीनो खेलहरू ग्रीन ग्रीन किन छन्?
मोबाइलमा अनलाइन क्यासिनोको इभोल्युसन
सबै तरल गोल्ड अनलाइन स्लॉट को बारे मा
के अटलांटिक सिटी माथि छ?
अप्ट आउट - कम महिलाहरु किन बच्चाहरु हुन्छन्
किन Cryptocurrency नवीनतम बैंकिंग बज्जवर्ड हो
अनलाइन स्लॉट संकेतहरू बुझ्दै
अनलाइन ब्ल्याक जैकमा डबल डाउन ह्यान्ड्स हो? अपडेट गरिएको: जुलाई 7, 2019 लेखक: Damon
0.1 जब तपाईं अनलाइन ब्ल्याकज्याक प्ले गर्नुहुँदा दुबै दबाउनुहुन्छ
0.2 हार्ड9डबल डाउन
0.3 हार्ड 10 र हार्ड 11 डबल डाउन
0.4 सफ्ट 16 लाई 18 लाई डबल डाउन
0.5 दुरुपयोग को लाभ र नुकसान
0.6 नियमहरूमा ध्यान दिनुहोस्
1 जैकपोट सिटी अनलाइन कैसीनो बोनस कोड >>
2 सम्बन्धित क्यासिनो समाचार:
2.0.1 झुकाव र तपाईं
2.0.2 Beginners को लागि भिडियो पोकर युक्तिहरु
2.0.3 कैसीनो खेलहरू ग्रीन ग्रीन किन छन्?
2.0.4 Google-Foundem Factor
2.0.5 मोबाइलमा अनलाइन क्यासिनोको इभोल्युसन
2.0.6 सबै तरल गोल्ड अनलाइन स्लॉट को बारे मा
2.0.7 के अटलांटिक सिटी माथि छ?
2.0.8 अप्ट आउट - कम महिलाहरु किन बच्चाहरु हुन्छन्
2.0.9 किन Cryptocurrency नवीनतम बैंकिंग बज्जवर्ड हो
2.0.10 अनलाइन स्लॉट संकेतहरू बुझ्दै
के डबल डाउन छ ...